Ururka Midowga Afrika oo sheegay in AMISOM aysan Faragelin ku sameyn doonin Doorashada Madaxnimo ee Soomaaliya .. | Somali Information Center
« Prof-Bashiir Nuur Xassan(Looyaan) oo kamid noqday Musharaxiinta xilka Madaxweynaha ee Soomaaliya 2012..
Madaxweynaha: “guddiga farsamadu waxay leeyihiin inay criteria-da dadka u fiiriyaan, awood intaas ka baxsan malaha” War-saxaafadeed!! »
Ururka Midowga Afrika oo sheegay in AMISOM aysan Faragelin ku sameyn doonin Doorashada Madaxnimo ee Soomaaliya .. August 17, 2012 Jimco:(SIC)-Ururka Midowga Afrika ayaa sheegtay in ciidamadooda AMISOM aysan wax faragelin ah ku sameyn doorashada madaxnimo ee Soomaaliyaaa, taasoo lagu wado inay dhacdo maalinta Isniinta ah ee soo socota, inkastoo wararka qaarkood ay sheegayaan inay dib u dhici karto.
Wafula Wamunyinyi oo ah ku xigeenka ururka Midowga Afrika ee arrimaha Soomaaliya oo hadalkan sheegay ayaa intaas ku daray in AMISOM ay gacan ka geysanayso oo keliya sugidda ammaanka Muqdisho inta ay doorashadu socoto.
“Murashaxiinta waxaan ku dhiirrigelinaynaa inay diiradda saaraan sidii ay wax uga bedeli lahaayeen mustaqbalka dalkooda, ayna u soo celin lahaayeen nabadda iyo sharciga,” ayuu yiri Wamunyinyi.
Sidoo kale, ergaygu wuxuu sheegay inaysan u ogolaanayn in doorashada faragelin looga sameeyo dibadda, isagoo inay rajo weyn ka qabaan in doorashadu ay dhacdo bishan Ogoosto 20-keeda oo horay loo iclaamiyay.
“Ciidammo dheeraad ah oo AMISOM ka tirsan ayaa Muqdisho la geeyay si ammaanka caasimadda ay u xaqiijiyaan inta ay doorashadu socoto,” ayuu Wafula hadalkiisa kusoo gabgabeeyay.
Afhayeenka AMISOM, Col. Cali Aadan Xaamud oo isaguna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inaysan jirin murashax ay la jirto, balse ay howshoodu tahay inay abuuraan jawi nabadeed oo ay doorashooyin ku dhacaan isagoo xusay in murashaxiinta muhiimka ah ay ku taageerayso gaadiidkeeda gaashaaman murashax walba oo u baahda gacan qabasho dhinaca ammaanka ah.
“Ma jirto cid gaar ah oo ay AMISOM la jirto, balse waxay diyaar u tahay inay kaalin weyn ku yeelato sidii lagu adkeyn lahaa ammaanka Muqdisho, mana jirto cid aan gaar ula safannahay,” ayuu yiri afhayeenka AMISOM, Col. Xaamud oo saxaafadda la hadlayay maanta oo Jimco ah.
Waa markii ugu horreysay oo sarkaal ka tirsan Midowga Afrika uu sheego inaysan wax faragelin ah ku sameyn doorashada madaxnimo ee Soomaaliya oo ay u taagan yihiin in ka badan 25-murashax iyo kuwo kale oo wada inay murashaxnimadooda ugu ku dhawaaqmaan maalmahan.
Dalka Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan in ka badan 15,000 oo askari oo AMISOM ah kuwaasoo ka socda dalalka Jabuuti, Kenya, Uganda, Burundi iyo Sierra Leone, waxayna caawiyaan dowladda KMG ah.